I-angle yombane yentsimbi yenqaba yamandla luhlobo lwesakhelo sesinyithi esigcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo, ucingo lomhlaba kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Ukusuka kulwakhiwo: inqaba yentsimbi ye-engile ngokubanzi, ipali yentsimbi yepali kunye netyhubhu yentsimbi enqabileyo yesiseko senqaba. Inqaba yentsimbi ye-engile isetyenziswa ngokubanzi ebaleni, kwaye ipali yentsimbi yombhobho kunye nentsimbi yombhobho wesiseko esincinci sisetyenziswa ngokubanzi kwindawo yasezidolophini kuba indawo yomgangatho incinci kune ...
Inqaba yamandla luhlobo lwesakhelo sesinyithi esigcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaqhubi abaxhasayo, ucingo lomhlaba kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Ukusuka kulwakhiwo: inqaba yentsimbi ye-engile ngokubanzi, ipali yentsimbi yepali kunye netyhubhu yentsimbi enqabileyo yesiseko senqaba. Inqaba yentsimbi ye-engile isetyenziswa ngokubanzi ebaleni, kwaye ipali yentsimbi yombhobho kunye nentsimbi yombhobho wenqaba encinci isetyenziswa ngokubanzi kwindawo yasezidolophini kuba indawo yomgangatho incinci kune-tower iron tower.
Inqaba yombane yenqaba yentsimbi luhlobo lwesakhiwo sensimbi esinokugcina umgama okhuselekileyo phakathi kwabaxhasi abaxhasayo kunye nezakhiwo zomhlaba kumgca wokuhambisa. Ngokobume bayo, inokwahlulwa ngokubanzi ibe ziindidi ezintlanu: uhlobo lwendebe yewayini yenqaba yamandla, ikati yohlobo lwenqaba yamandla, uhlobo lwenqaba yamandla, uhlobo olomileyo kunye nohlobo lwebhakethi. Ngokwenjongo, inokwahlulahlulwa ngokombane wenqaba yamandla, uhlobo lwenqaba yamandla ethe nkqo, inqaba yamandla ohlobo lwenqaba kunye nenqanaba lokutshintsha amandla kwinqaba yeempawu zenqaba (ukubuyisela inqaba yomqhubi wenqanaba), inqaba yamandla kunye nokuwela amandla inqaba kukuba iindidi ezahlukeneyo zenqaba zezesakhiwo sendawo yomqolo, kwaye amalungu ikakhulu abunjwe ngentsimbi enye ye-engilateral okanye i-angle yentsimbi edibeneyo. I-Q235 (A3F) kunye ne-Q345 (16Mn) zisetyenziswa ngokubanzi. Unxibelelwano phakathi kwamalungu lwenziwe ngee-bolts ezirhabaxa, kwaye yonke inqaba iqhagamshelwe yintsimbi ye-engile kunye nokudibanisa intsimbi Ezinye iinxalenye ezinjengeenyawo zenqaba zidityaniswe kwindibano ngeepleyiti zentsimbi ezininzi. Ke ngoko, kulunge kakhulu kwisinyibilikisi eshushu, i-anticorrosion, ezothutho kunye nolwakhiwo. Kwinqaba leyo ubude bayo bungaphantsi kwe-60m, isikhonkwane seenyawo siya kubekwa kwenye yezona zinto ziphambili zeli nqaba ukulungiselela abasebenzi bokwakha benyuke inqaba.
Okulandelayo: Inqaba yonxibelelwano
Stainless yoNxibelelwano tower
Unxibelelwano lwentsimbi yeNqaba
Inqaba yoNxibelelwano Inqaba yonxibelelwano luhlobo oluthile lokuhambisa inqaba, ekwabizwa ngokuba ngumqondiso wokuhambisa inqaba okanye inqaba yomqondiso. Umsebenzi wayo ophambili kukuxhasa umqondiso kunye nenkxaso yomqondiso ohambisa i-eriyali. Isetyenziswa kumasebe onxibelelwano afana neTshayina Imfono, China Unicom, umnxeba wonxibelelwano, inkqubo yokuma kwesatellite (GPS). 1, Iimpawu kunye nokusetyenziswa kwenqaba yonxibelelwano 1. Unxibelelwano lwenqaba: yahlulwe yangumhlaba ...
Inqaba yomhlaba wonxibelelwano
Indawo yokunxibelelana Inqaba yokwakheka komhlaba yonxibelelwano ibandakanya ukumisa inqaba yokunxibelelana kokuma komhlaba oqhelekileyo kunye nokuhombisa ubuhle benqaba yomhlaba. Inazo zonke iimpawu zayo yonke indawo yokuhlala kumhlaba oqhelekileyo okwangoku. Yindibaniselwano egqibeleleyo yomhlaba oqhelekileyo wenqaba yokunxibelelana komhlaba kunye nokuhombisa i-eriyali efihliweyo, kwaye kukwandiswa okungaphezulu kunye nophuhliso lweemveliso zenkampani yethu ukuya kwicala eliphezulu; Uluvo oluphambili ...
Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, Umbane we-Angle Steel Towers, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano, I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba, Ulwakhiwo Tube Steel, Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi,